GALMA MOOTII YAABDI – Beekan Guluma Erena
GALMA MOOTII YAABDI	Beekan Guluma Erena
Uncategorized April 10, 2016	2 Comments
GALMA MOOTII YAABDI
Jireenyi addunyaa – martisaa qormaata
Namnuu kana laalee – kirkiree sodaata
Dursa dachee qori – ni geessas waaqarra
Dafqan malee hin taatu – jireenyi lafarraa
Dhama’anis baay’ee – kan facaasan haamu
Ibsaan dhugaan ifu – afarsanuu hin dhaamu
Tabba gubbaa ba’i – eela keessas bu’i
Harka osoo hin kenniin – wareegamii du’i
Hunduu dhufee bada – isa kamiif nahu
Tokko lama jechaa – miliyoona gahu
Of hin tuffatiin – atuu dhimma baafta
Akka tuuta goondaa – leenca rafe kaafta
Lootuun xiqqoon sunuu – galma mootii yaabdi
Guyyaa tokko kaata – hin kutatiin abdii !
← ODAA BAQAQSUU FEETUU?
GALMI KEENYA EESSAA? →
2 thoughts on “GALMA MOOTII YAABDI”	Aadam TibbooApril 10, 2016 at 6:16 amPermalink	bayeessa,akkanumaan itti fufi!
Reply	Guutamaa DhuunfaaApril 10, 2016 at 8:02 amPermalink	FUULA marii bareedaadha hayyoota oromoo biyya jiraniif haalaan haa qoodamu. Waan keessa isaanii irratti haa dhibaasanii…